Umncedisi weVenkile yokuThengisa: Uphuhliso oluLandelayo olukhulu kwi-ECommerce? | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 11, 2019 NgoLwesine, Julayi 11, 2019 UJake Rheude
Ngu-2019 kwaye uhamba kwivenkile ethengisa izitena nodaka. Hayi, ayisiyonto yokuhlekisa leyo, kwaye ayisiyoxesha lokudubula. I-ECommerce iyaqhubeka nokuthatha ukuluma okukhulu ngaphandle kwepayi yokuthengisa, kodwa kusekho amanqwanqwa angafezekiswanga xa kufikwa kwizinto ezintsha kunye nokulula kwezitena nodaka. Omnye wemida yokugqibela bubukho bevenkile enobubele, eluncedo.
"Ndingakunceda njani?" yinto esiqhele ukuyiva xa singena evenkileni, kwaye siyithathile. Kuzo zonke iiwebhusayithi ze-eCommerce ezibekekileyo ezibandakanya izinto ezinobuhlobo ze-UI ezinje nge-AI yokugcwalisa ngokuzenzekelayo okanye iziphumo zokukhangela isonka, zininzi ezinye, ukuba buthuntu, zimunce ngokupheleleyo. Ingayinto ye-godsend ukuba nomncedisi wevenkile onobuhlobo avele kwaye abuze imibuzo embalwa elula malunga nento endiyifunayo. Ngaba inokwenziwa kwi-Intanethi? Eli nqaku liza kujonga amathuba akhoyo kwaye babelane ngezixhobo ezithile, iingcebiso kunye neengcebiso.
Ungamdibanisa njani umncedisi wakho
Ngelixa abancedisi bezinto zokuthenga bakuphuhliso, inkqubo eya kuthi izive ingumntu kubathengi bakho ayinakufikelelwa- okanye kuhlahlo-lwabiwo mali. Nangona kunjalo, akunzima kakhulu ukudibanisa usetyenziso olwahlukeneyo ukunika iindwendwe zakho incasa yezona zinto zibalaseleyo zomncedisi wevenkile ngaphandle kokufumana kakhulu.
Kwi-Facebook Messenger, uSephora angayenza yonke into.
Iincoko ze-Chatbots aziyonto intsha, kodwa i-UX yazo iphuculwe kwaye izicelo zazo zahlukile. Kule mihla kulula ukuyila ngokudibanisa iincoko kwiinkqubo zakho.
Imiyalezo ye-Facebook: Uyazi ukuba abathengi bakho baskrola kwiFacebook yabo yesiqingatha sosuku; kutheni ubenza bashiye isicelo xa befuna into kuwe? Ukuba nenkqubo yoku-odola efikeleleka ngokulula kufana nokuba unakho ukubiza umntu oncedisayo- kwaye endaweni yokuhamba uye kwiwebhusayithi yakho, ukuthumela umyalezo kuFacebook kwenza ukuba bazive ngathi bathetha nomntu. Sephora Uye wakhokelela ekuhlawulisweni kwikamva kwihlabathi lobuhle, enezinto ezimbini ezahlukileyo zencoko ngaphakathi kuFacebook Messenger usebenzisa i-Assi.st: Abathengi banokubathumelela umyalezo wokuba babeke idinga nomcebisi ngobuhle, okanye bafumane iingcebiso ngokuthenga izigqibo.
Uku-odola ukutya kwepiki okanye ukuhanjiswa kukhutshiwe nakwilizwe le-Facebook Messenger. I-Starbucks yimiyalezo embalwa nje kude nokufumaneka kwivenkile yendawo yakho, iDominos inokukuxelela ngesivumelwano se-pizza semihla ngemihla, kwaye iPizza Hut ikuvumela ukuba ugqibezele lonke ulwazi loku-odola ngaphandle kokushiya i-Facebook. Zonke ezi zinto zenziwa kusetyenziswa iincoko ezahlukeneyo ezinamava afanayo naxa uncokola nomhlobo.
INkonzo yabaThengi: i
Sebenzisa iincoko ukunceda abathengi bakho ngemibuzo yenkonzo yabathengi ngokusisiseko kufana nokuba nomncedisi ongumntu ongalaliyo. Abayi kuba nakho ukuphatha izinto ezinkulu, kodwa ukuzenzekelayo izinto ezincinci kunokuthatha ubunzima kumagxa akho asezantsi. Ibizwa ngokufanelekileyo, inkonzo efana Ibhotile yengxoxo inokusetyenziselwa ukwakha ngokulula imeko yakho, imibuzo, kunye nezenzo- hayi amanqanaba eBandersnatch obunzima, kodwa iyawenza umsebenzi wenziwe. Inezinga eliphezulu lokubuya, kwakhona: kuvavanyo, i-bot yencoko yakwazi sombulula i-82% yokunxibelelana ngaphandle kwesidingo searhente yomntu.
MongoDB Unencoko yenkonzo yabathengi enje, ekwaziyo ukuqiniseka ukuba undwendwe lukhokelo olufanelekileyo ngokubuza imibuzo embalwa, kwaye ukuba kunjalo, babalathise kwintengiso echanekileyo. USephora wenza enye inkangeleko kule nkundla- uyamangaliswa kukuba bakumdlalo wenkonzo yabathengi be-chatbot? Kwiwebhusayithi yabo, ayisiyiyo kuphela ukubuza imibuzo esisiseko- unokufumana nezindululo zokuhombisa kwi-AI yabo. Abathengi bayakwazi ukuskena ifoto yokubukeka kwento abayithandayo naphina kwaye bafumane iingcebiso malunga nento onokuyenza ukuze ujongane nembonakalo.
Ukuqinisekisa iindwendwe zakho ukuba zifumane ii-imeyile kuwe ayisiyonto ilula- kuya kuthini ukuba ingxoxo enokubenza baqiniseke ngawe, kwaye ubathumele kuphela kanye le nto bafuna ukuyibona? Yile nto ibango leTechCrunch's yokwenza, ngaphandle kwemizamo eyongezelelweyo kwinxalenye yomrhumo kwaphela. Xa umfundi esayinela iindaba ezenzelwe wena esebenzisa inkonzo yengxoxo, isoftware ye-AI emva koko igcina uhlobo lweendaba abazifundayo kwaye ibathumela kuphela amanqaku abacinga ukuba banomdla kuwo.
Vumela iStitchFix izame ukukwazi ngcono kunokuba uzazi ngokwakho
Ukwakha kwimodeli yakho yeshishini
Ngaba ngekhe kulunge ukuba abathengi bakho bahlala beziva ngathi bafumana uncedo lomntu kuwe? Kukho iinkampani ezimbalwa kunye namashishini akwazileyo ukwakha uvakalelo lomncedisi ongumntu kwimodeli yeshishini labo.
Inxalenye yokulingana kwebhokisi yokubhalisela ephumeleleyo kukufumanisa ukuba abathengi bakho bathanda ntoni ukuze ubathumele into elungileyo. IsitayileIindawo zemodeli ngokupheleleyo ekufumaneni abathengi ukuba baxelele iStitchfix ngezinto abazithandayo, ke uStitchfix angabathumela izinto abanokuzithanda. Olu luphawu lomntu oluziva lubaluleke kakhulu, kuba umntu ngamnye ubhangqiwe kunye nosiba sobuqu emva kokugcwalisa imibuzo eneenkcukacha. Abathengi bahlawula umrhumo ukuze babhalise, ethi itsalwe xa begcina ubuncinci bezinto ezithunyelwe kubo.
Nangona kunjalo, akukho shishini lingenza nzuzo ngoonobumba abodwa abajonga ngaphezulu kwiprofayili nganye kunye nokuhlela ikhathalogu enkulu yezinto. Abantu bayoyikeka ngokukhawuleza nangokufanelekileyo besebenzisa izixa ezikhulu zedatha kunye nokwenza izigqibo- ngumsebenzi wobukrelekrele bokuzenzela. I-AI yindlela iStitchfix esikala ngayo ngokukuko, kunye nealgorithm yayo ejonge kwiindlela, imilinganiselo, ingxelo, kunye nokukhetha ukunciphisa uludwe lweengcebiso zokukhetha isitayile. I-AI inceda umenzi wesitayile, othi ke ancedise umthengi kwimvisiswano yokwenyani yobuchwephesha boluntu.
Ukuba Uyithandile, Ungathanda…
Umntu oyinyaniso oyithandayo uyayazi into oyithandayo kunye nento oyithengileyo, kwaye usebenzisa olo lwazi ukucebisa ngezinye izinto onokuzithanda. Akukho nzima kubukrelekrele bokulingisa ukulinganisa "ukuba uyayithanda loo nto, ungayithanda le" iingcebiso ezizezakho. Isiqingatha sedabi senza ukuba abathengi babhalise ukuze ukwazi ukuqokelela idatha yabo, kwaye esinye isiqingatha siyisebenzisa ngokufanelekileyo loo datha. Ngubani owenza lo msebenzi mkhulu? Uyithelekelele. IAmazon.
IAmazon iyazi ukuba i60% yexesha, umntu ojonga umenzi wekofu uKeurig uye wajonga ezilahlwayo zeK-Cups, kwaye mhlawumbi ikomityi yokwenene ukusela ikofu kuyo. Yenza ntoni i-AI? Cebisa ezo mveliso kuye wonke umntu ojonga iKeurig. Kufana nokuba nomncedisi osoloko ezama ukuqashisela into oyifunayo ngokusekwe kwinto oyikhangeliyo, into onqakraza kuyo, kunye nezigidi zabanye abantu abazenzileyo kwimeko yakho.
Ngaba i-AI inokukunceda ufumane imveliso egqibeleleyo?
Abaphandi kunye nabaphuhlisi bahlala bezama ukuphendula lo mbuzo: Ngaba singenza umncedisi othenga ngokwenene? Okwangoku, zimbini izicelo ezinomdla ezisondeleyo.
Enye ye-Macy's On-Call, eyayimangalisa ngaphambi kwexesha layo, kwaye ikwahlanganisa ngokukodwa i-AI kunye neempawu zokuncedisa ekuthengeni ngokundwendwela ivenkile yezitena nodaka. Xa abathengi betyelele ivenkile kaMacy, banokutsiba kwifowuni yabo kwaye bafikelele kwi-On Call function ukubuza imibuzo malunga ne-inventri, i-odolo abayibekileyo, okanye nokufumana umkhombandlela kwindawo yelinye isebe. Into ekufuneka bayenzile kukuchwetheza kwimibuzo kwaye bafumana iimpendulo kwangoko.
I-On-Call kaMacy yavavanywa kwiivenkile ezili-10, kodwa ayikaqhubeli phambili ngaphaya. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kuyathembisa, kwaye basebenzisana no-IBM Watson. Ngenxa yokwanda kokuthandwa kokusebenzisa iincoko, lutyalomali olunokuhlawula kubo kwixa elizayo, kwaye kufanelekile ukuzama ukulinganisa ivenkile ebonakalayo eCommerce.
Nangona kunjalo, olona phuhliso lutshanje nolona lukhulu yinkqubo ebizwa ngokuba Elly. U-Elly yeyona nto ikufutshane kuye kumncedisi wentengiso oqinisekileyo-nangona kunjalo, ukwinqanaba lokukhula. Uyi-AI enceda abathengi ukuba bafumane imveliso egqibeleleyo ngokubuza uthotho lwemibuzo, amanqaku okulinganisa, amaxabiso kunye nayo nayiphi na into athi umthengi bayayikhathalela. Ukwinqanaba lokuvavanya okwangoku, kodwa okwangoku unokucela uncedo lwakhe ekufumaneni i-smartphone yakho egqibeleleyo ukuba ufuna ikamva lekamva.
Umncedisi uyalazi ishishini labo ngaphakathi nangaphandle. Bajolise ekwazini ulwazi oluninzi malunga nomthengi wabo kangangoko kunokwenzeka, ukubanceda benze izigqibo ezifanelekileyo zokuthenga kwaye bashiye banelisekile (kwaye, ewe, babuyele ngaphezulu). Okokugqibela, bafuna ukuba oku kwenzeke ngendlela yendalo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Ingxaki yokusebenzisa abancedisi bobuntu kukuba abanako ukukala ngokufanelekileyo kwaye basebenzise isixa esikhulu sedatha ngendlela enentsingiselo. Ikamva labancedisi bevenkile yokuthenga kukudibanisa ukunceda kunye nokwenza ubuqu bomntu oncedisayo kunye namandla okuqokelela idatha kunye nesantya sobukrelekrele bokuzenzela. Isicelo esinye asinakukwenza konke (okwangoku), kodwa ukudibanisa izixhobo ezimbalwa ezikhoyo ngoku ezinokuvula amanqanaba amatsha okusebenza kwamashishini eCommerce.
tags: ingxoxoEzikaDominoellyfacebook umthunywah & mMongoDBstylist somntusephora
UJake Rheude nguMlawuli weNtengiso weRed Stag Fulfillment, indawo yokugcina izinto nge-ecommerce ezalwe ngaphandle kwe-ecommerce. Uneminyaka yamava kwi-ecommerce kunye nophuhliso lweshishini. Ngexesha lakhe lasimahla, uJake uyakonwabela ukufunda malunga neshishini kunye nokwabelana ngamava akhe nabanye.
Isishwankathelo seSiza seA Alexa.com: Amanqaku amatsha anika abaThengisi i-Snapshot engcono yoPhando kunye naMathuba oMxholo, simahla